Semalt: Uchishandisa Hwemhando Yakarongedzwa Dhata Kuti Uwane Yakawanda YeTraffiti Kune Yako Webhusaiti
Wakambo pfuura nepamhepo rakapararira uchitsvaga peiri sock? Kwete kubheja zvaisave nyore. Iyo pfungwa imwechete inoshanda kune webhusaiti.
Kuwana ruzivo pa internet zviri nyore uye zvakanyanya kuomesa, uye ndosaka chikonzero. Kana iwe ukapa webhusaiti yako kune Semalt, hapana mubvunzo kuti ichabuda pamusoro. Izvi zvinodaro nekuti isu tinoziva kuisa maficha, zvinyorwa, uye mifananidzo pazvinenge zvakakodzera. Kungofanana nevavaki, isu takapedza makore tichishanda nezvinhu izvo webhusaiti yako inoda uye isu takatsvaga nzira yekuita webhusaiti yako kuti iuye neiyo mibairo yakanaka.
Ndokusaka wega webhusaiti ichifanira kunyoreswa pamwe neSemalt asi sezvo izvo zvisingaite, isu tinogumisa kuwanda kwedu kuvimbisa mawebhusaiti senge ako. Sevashandi, isu tine maturusi uye matarenda ekuumba webhusaiti yako zvakanaka zvekuti zvinogara zvichizoonekwa kana mazwi ako akatsvaga akatsvaga asi akakwana nazvo.
Ndezvipi Zvemhando Yakarongeka Idata?
Aya ndiwo marongero ezvinyorwa pane webhusaiti zvakanaka. Semalt inobatsira webhusaiti yako nekuisa zvinhu zvakanaka munzvimbo dzakakodzera. Izvi zvinogonesa vashanyi vako uye injini dzekutsvaga zvinokambaira kuti vafambe zvakasununguka. Iyi ficha inogona kuve yekupedzisira chinhu chauri kushaya paunoyedza kuita kuti webhusaiti yako iverengerwe. Asi zvisinei nekuti akakwira ako SEO mazwi makuru, hazvizove nyore kuwana kana yako webhusaiti isina kunyorwa nenzira kwayo.
Kwemakore, Semalt akashanda nevatengi uye mawebhusaiti. Kuburikidza nemakore aya, zvave zvakajairika kuwana mawebhusaiti ayo anoshandisa zvinoshamisa zvemashoko makuru eSEO. Asi aya mawebhusaiti haatombowana chero traffic kana kudzvanya, zvinova dambudziko rakanyanya kune varidzi vazvo. Paunobvisa webhusaiti mavara, mafonti masitayiri, uye magirafu, zvese iwe zvasara iwe ndiyo chimiro.
Pfungwa yedu yemunhu inotarisa kuenzana, maitiro, uye kuteedzana pakudzidza kana kunzwisisa. Zvinorehwa izvi ndezvekuti isu tinonyanya kufarira kuteedzana kwe 1,2,3,4 kana tichidzidza manhamba edu kuti mufananidzo wakaparadzirwa wehuwandu uhu sa 10,000, 100, 3, 6. Pfungwa dzedu dzinosarudza kutsvaga zvinhu kwavanotarisirwa be.
Vashandisi paintaneti vanofarira kutanga kuverenga chinyorwa kana yako yewebhu zvemukati kubva kune runyoro ruzivo ruripo pasi kusvika pane hwakaoma kunzwisisa. Kazhinji, kana iwe uchitanga kubva kune dzakaoma kunzwisisa, vaverengi vanoshaya kufarira voenda kune webhusaiti iri nani.
Sezvo iwe uchiziva, maGoogle mazano akagadzirirwa kukodzera vashandisi kutanga. Izvi zvinoreva kuti inonyanya kufadza webhusaiti yako kune muverengi, inonyanya kufadza inova injini yekutsvaga yaGoogle. Google's algorithm inounganidza ruzivo kubva mukutsvaga uye inoshandisa iyi data kugadzirisa yako saiti. Izvo zvinoshanda sei kuti kana mushandisi akawana yako saiti, SERP kana injini dzako dzekutsvaga dzinoongorora kuti vashandisi ava vanogara kwenguva yakareba sei pane saiti. Webhusaiti yakarongedzwa zvakanaka inoita kuti mushanyi agare nguva refu pane saiti iyo nzvimbo isina kunyatsogadzirirwa nzvimbo inoita kuti muverengi abve.
Zvimwe zvinhu, sekuyera kwechiyero, zvine basa zvakare kana uchifunga nezvesaiti yepasiti. Chimiro chakanaka chesaiti chinogona kuderedza chiyero chekupokana, uye yako muverengi nguva yekugara. Paunosanganisa izvi zviviri zvinhu, webhusaiti yako inozviverengera.
Iyo yakanaka saiti dhizaini inopa yako saiti ine zviri nani saiti nzvimbo.
Saiti zvinongedzo ndiwo ekunyora fomati muSERP iyo inoratidza yako saiti peji rekutanga pamwe nehuwandu hwemukati hunongedzo. Aya mawebhusaiti anobatanidza ndarama kana zvasvika kune SEO optimization. Ivo vanoita kuti webhusaiti yako ive nyore kuverenga kuburikidza newe mushandisi. Inonongedza muverengi ruzivo rwakakodzera kwazvo pane webhusaiti yako, iyo inowedzera mukurumbira wechiratidzo chako, uye vashandisi vanovimba nezvamunounza. Izvi zvese zvinobatsira webhusaiti yako ive neinzvimbo iri nani muSERP.
Iwe unowana sei aya saiti nzvimbo?
Iwe haugone kuenda kuGoogle yekutsvaga koni uye uzadze fomu rekuwana saiti viungo. Zvakare, iwe haugone kukumbira saiti yekubatanidza. Izvi zvinongedzo zvinopihwa otomatiki neGoogle's algorithm kana yako saiti dhizaini painenge yakanaka zvakakwana kuti ikwanise. Uye pasina izvi zvinongedzo zvesaiti, webhusaiti yako inogona kutambudzika nekuderedzwa kune yako yekutarisa traffic, yakakwira CTR, uye nekuwedzera kushandurwa.
Injini dzekutsvaga dzinoda zvirinzvimbo zvesaiti kuti zvinyatsokambaira.
Webhu zvinokambaira seGooglebot zvinokambaira kuburikidza nemawebhusaiti zvichienderana ne chimiro chavo. Iyo webhusaiti yakarongedzwa zvakanaka inoita kuti zvive nyore uye nekukurumidza kuti ufambe mukati uye uwane mazwi akakosha awakaisa. Chinangwa cheWebCrawler iyi kuratidza index yezviri mukati kudzosera kuongororwa kwayo sekutsvaga mhinduro.
Iwe unofanirwa kuziva kuti zvirimo zviri pawebhusaiti yako hazvizivikanwe neGoogle. Aya anokambaira haangowani mhedzisiro yavanosarudza kuratidza kana chinyorwa chakatsvaga. Google pachayo yakabuda ichitaura kuti vangangodaro vasina kuwana mamwe mapeji kana ma URL nhasi. Izvi zvinodaro nekuti ivo havana kuonwa neGoogle's WebCrawler. Kuti uone kuti webhusaiti yako uye mapeji ewebhu haatambure zvakafanana, iwe unofanirwa kuita kuti webhusaiti yako ive nyore kuwana, kukambaira kuburikidza, uye index neWebCrawler's.
Iyo yakanaka saiti dhizaini ndiyo musimboti wekukonzeresa SEO
Mukupedzisira, kuti yakanaka sei SEO yako inonyanya uye yakawanda nguva yakanyatsotsanangurwa neyako saiti mamiriro. Nyanzvi dzakawanda dzinopokana kuti pasina yakanaka saiti mamiriro, SEO yako haizombobudirira. Iyo saiti dhizaini ndiyo hwaro hweSEO yako, uye sekunge chero chivakwa, hwaro hunofanirwa kuve hwakasimba. Nheyo isina kusimba kana isina kugadzirwa yakavakirwa inongoreva kuti chivakwa chako chinopera. Pakupedzisira, inongova nyaya yenguva. Saizvozvo, yako webhusaiti pakupedzisira ichakundikana pasina chimiro chakakodzera.
Aya matanho ekugadzira iyo chaiyo saiti dhizaini
Gadzira chinzvimbo chepamusoro usati wagadzira yako webhusaiti
Kana iwe uri kutanga webhusaiti itsva, iwe unogona kuronga kuti ndeipi fomu iyo saiti inotora kubva kutanga. Kunyangwe usati waenda kunogadzira mapeji muCMS, iwe unofanirwa kuronga kuti ndeipi chimiro iwe yaunoda webhusaiti kutora. Iwe unogona kuita kuronga pane spreadsheet, chena, kana pane izwi processor.
Ruzivo rwako runofanirwa kuve nehutongi hwepamusoro. Ruzivo rwunoratidzwa runofanira kuyerera nenzira ine musoro. Paunenge iwe wapedza, ino hierarchy ichava yako yekufambisa uye URL chimiro, saka danho rakakosha kana rakakosha raunofunga kutora rinokanganiswa nezvaunoita pano.
Pane mashoma mashoma emamiriro epamusoro aunofanira kuchengeta mundangariro.
Gadzira zvinangwa zvako zvepamusoro. Usaedze kunyanyisa kufunga kana kuomesa maitiro.
Chengetwa huwandu hwemakuru epakati pakati pezviviri kusvika zvinomwe. Kunze kwekunge iwe uri webhusaiti eCommerce yekutengesa, iwe haudi kuve nemapoka akawanda. Inoita yako webhusaiti zvakare, "yakabatikana."
Edza kuyera kuenzana nenhamba yezvikamu zviri mukati mechikamu chimwe nechimwe. Kunyangwe izvi zvisiri zvekumanikidzwa, icho chinhu chimwe chinhu vagadziri vewebhu vanofanirwa kuedza uye kuzadzisa. Rimwe boka hombe harifanirwe kuve nemakuru gumi, nepo rimwe riine mashanu chete. Inoita kuti webhusaiti ioneke seisingabatsiri.
Yako URL chimiro inofanirwa kutevera yako Navigation hierarchy.
Chimwe chinhu chakakosha chimiro chako URL. Kana iwe waita danho rekutanga nemazvo, izvi hazvifanirwe kunge zvichinetsa. URL yako inotakura iyi webhusaiti yakakosha, chikamu chimwe chikuru, pamberi pechepamberi. Inofanira kutaridzika sewebsite www.Semalt.net/SEO/UsingQualityStformDataToGetMoreClicks. Ichi chinongedzo chinoronga ruzivo rwunoratidzwa zvinoenderana nehupfumi hwaro.
Nzvimbo yako yekufambisa inofanirwa kunge iri muCSS kana HTML format.
Paunogadzira webhusaiti, chengeta coding iri nyore. Kushandisa yakawanda inomanikidza kuisa makodhi mutauro kunoita kuti zviome kune WebCrawler's yekuvhara yako saiti.
Shandisa yakadzika, yakadzika nzira yekufamba.
Paunenge uchitsvaga kuti chii chinoenda kupi, chenjera kuti urege kuviga nzvimbo dzakakosha webhusaiti yako yakadzamawo munzvimbo yako yekutungamira, nzvimbo dzakadzika dzisingashande zvinoshanda zviri nani kune vese vanokambaira pawebhu nevaverengi vako.
Gadzira yakakwana yekubatanidza yemukati dhizaini
Isu takaratidza zvikonzero zvitatu nei tsika iyi yakakosha pakuumbwa kwewebsite yako. Heino rondedzero yeiko zvemukati zvinongedzo zvakakosha:
Vanobvumira vashandisi kufamba vachiona webhusaiti
Vanobatsira kusimudzira ruzivo rwepamusoro pawebhusaiti.
Ivo vanobatsira kuparadzira simba rekutungamira pane rese webhusaiti, kukupa iwe chinzvimbo chiri nani.
Chimwe nechimwe cheizvi chinobatsira kugadzira webhusaiti yakanyatsogadzirirwa.
Zvemukati zvinongedzo hazvina kuita sekunge rocket sainzi. Izvo zvinongoreva kuti unobatanidza chimwe chinhu kana peji pane yako webhusaiti kune inotevera. Iyi yekubatanidza yemukati inofanirwa kutungamira muverengi wako kune inoenderana zvikamu zvemapeji uye iro guru chikamu peji.
Zvemukati zvemukati zvinotaurira injini dzekutsvaga kuti ndeapi mawebhu akakosha uye kuti ungasvika sei ikoko.